FAQs - Dongguan Zhantuo indhaha Lens Co., Ltd
Gashto AR qabsiyo Realit HelMet Lens
Lenses daahan milicsiga
Photoelectric Lens Taxanaha
lenses goobaabin & Aspherical
Askunmay & Cylindrical Mirror
ookiyaale Sports taxane
Ammaanka HelMet Lens
Ski ookiyaale Lens
Fuushan dabaysha lenses
ookiyaale Dabaasha lenses
ookiyaale Nabad & Protection taxane
Lenses Caymiska Shaqaalaha Warshadaha
Military Goggles Muraayadaha
Medical Eye Protection Muraayadaha
Laser Protective Muraayadaha
Lenses maaskaro Fire
Gernel Muraayadaha Taxanaha
Hagaajin lenses Progressive Multifocal
Muraayadaha kala fog lenses
Graphic Muraayadaha lenses
Products Transparent Taxanaha
sahay hotel looxa
Looxa taagan bandhigay
qalabka xafiisyada looxa
Dayashada REVO daahan
Caaryada Design & Sameynta
Indhaha Mirror nadiifinayo
Qaab Lens indhaha
Ka qortay nadiifinayo dusha
Waa kuwee waxyaabaha aad soo saaraan?
Waxyaabaha indhaha ugu muhiimsan yihiin dhammaan noocyada kala duwan ee gashto goobaabin aan spherical, gashto VR 3D, gashto LED, wax soo saarka hufan looxa ( shuqullada farshaxanka, sahay qoyska iyo hotel, qalabka xafiisyada, articles of isticmaalo maalin kasta, iwm ) , HUD qiyaas gashto, koofiyadda badbaadada visors, gashto sports (Ski Goggles Lens, gashto lagu dabaasho, Baaskiilka tartanka gashto), muraayadaha gashto, warshadaha gashto ilaaliya, lenses gaar ah-qaabeeya kala duwan dusha qalooca, wax soo saarka caag ah, iyo Wasakh.
waxaad siin kartaa wax soo saarka OEM?
Haa, oo aan awoodno. Waxaan samayn kartaa wax soo saarka caaryada, wax soo saarka iyo processing adeegyada isku dhafan si waafaqsan sawirada macaamiisha ama baarka.
Haddii aad loo qaabeeyay noo taraya?
Sure, Haddii aad na siiyaa aad fikrado iyo xuduudaheedu la xiriira, waxaan kuu diyaarin doonaa iyo waraaqaha dhamaystiran oo sugidda design aad u xaqiijin. Ka hor inta si aan ku dallici doona ujrada design, laakiin inta lagu guda jiro soo saarka mass, waxaan soo celin doonaa kharashka design.
Waa kuwee farsamada waxaan isticmaali kartaa on saarka?
Xoojinta: Si looga hortago sheyga ka xoq, xidho, iyo saamaynta anti
Dyeing: Ku dar Midabka in wax xumu, ka dhigi wax soo saarka la leh midabyo kala duwan
Electroplating: keena midabada Wehliyaha, midabada Water lacag ah, midabada Alifana , dahaadhay Qaabka, iwm saamayn dusha u qurux badan.
Daahan: Isticmaalka technology filimada iyo vacuum khafiif ah indhaha, in dusha sheyga dahaadhay film anti UV, film AR, faraha film anti, iwm
Maxaa ku saabsan lacag bixinta iyo muunad?
lacag Sample sida ay wax soo saarka gaar ah, haddii ay tahay wax soo saarka ballaaran, waannu soo noqon kartaa lacag version saamiga idinku sugan qiimaha sheyga.
Ka dib markii nabdeed lacag version muunad, macmiil noo dajiya a file Xaqiijisay / email, sida ay kakanaanta ee alaabta, waxaan qiimeyn muddo dhintaan tijaabo iyo waqtiga awdidu. Sample version bixinta waa 5 ilaa 10 maalmood oo caadi ah. Haddii aad u baahan tahay tijaabada inventory si loo xaqiijiyo tayada, waxaan ku siin kara in aad muunad for free, oo kaliya aad u baahan tahay bixiso kharashka gaadiidka.
Diraya-baarka by TNT , UPS , FedEx , oogeen Express.
Ma leedahay caaryada ee dhammaan tusay badeecada?
The sawirada on website waxa soo saarey warshad, oo kaliya ku bixiyeen sidii tixraac, haddii aad rabto in aad ogaato faahfaahin dheeraad ah fadlan weydii our iibiye.
Sidee dheer waa muddo soo saarka caaryada?
Sida laga soo xigtay size iyo kakanaanta ee wax soo saarka si loo ogaado set hal waqti furitaanka caaryada iyo waqtiga ku dhameystaan, sida laga soo xigtay shuruudaha ka mid ah amarada iyo macaamiisha si ay u qiimeeyaan tirada saabka caaryada iyo nuqulka lambarka caaryada. Ka dib markii la go'aaminayo saamiga ama barbaro, wareegga General saarka caaryada for 20-30 maalmood.
Waa maxay MOQ ah?
The tirada si ugu yaraan waa 3K, Sidoo kale waxaan soo dhawaynaynaa tiro yar oo amar adag, laakiin qiimaha ay noqon doontaa sare. Haddii amar waa weyn, waxaan ka heli kartaa wanaagsan qiimaha wax cayriin iyo in la yareeyo kharashka maamulka, sidaas darteed waxaan ku siin kara qiimo ka jaban.
Sidee dheer waa markii dhalmada?
Sida laga soo xigtay muddo caaryada, tiro si oo heshiis ah si ay, guud ahaan waxaan Delivery doono badeecada 20 maalmood gudahood ka dib markii mold.Delivery wax soo saarka ah. record Our ugu fiican waa 50000 gudahood 1day for gashto VR
Waa maxay habka bixinta?
Common EXW, FOB, CIF, iwm
Maxaa caddeyn aad?
ISO9001, warbixin SGS baaritaanka iyo in ka badan, kuwaas oo loo hubiyo in dhammaan horumarka-soo-saarka alaabta si habsami leh.
Waxaan xubin ka tahay Alibaba Trade Hubinta oo waa adeeg cusub oo ay bixiyaan Alibaba, ilaalinta lacagta iibsadaha ayaa si loogu si loo hubiyo in qeybiyeyaasha gutaan waajibaadkooda ku saabsan amarka bixinta iyo tayada wax soo saarka. Waxaad ku bixin kartaa lacagta ay ku alibaba, ama isticmaal paypal. alaabta Large qaadanayo T / T deposit 30% bixisay, dheelitirka bixisay ka dhanka ah koobiga BL.
About Information Shipping The
waxaan isticmaali kartaa wakiilka maraakiibta u gaar ah?
Haa, aad awoodo. Waxaan wada shaqeyn la leh forwarders badan. Haddii aad u baahan tahay, waxaan ku talin karaa qaar ka mid ah forwarders idinka iyo waxaad is barbardhigi kartaa qiimaha iyo adeegyada.
Our Dekedda ay ka dhoofayaan?
Haddii Waxaan doonayaa inaan booqdo aad warshad, Waa kuwee waa garoonka diyaaradaha ee kuugu dhow ama caalamiga ah garoonka diyaaradaha qoyska?
Maddaarka Caalamiga ah ee Shenzhen Bao'an waa garoonka diyaaradaha ee kuugu dhow, Airport International Guangzhou- Baiyun waa wax yar ka fog. Fadlan noo sheeg ka hor booqashada, waxaan kuu diyaarin doonaa darawalka si aad u soo qaado.
About Habka Amarka
1, oraah soo baara-Professional
2, Xaqiiji qiimaha, markii hogaanka, farshaxanka, muddada lacagta iwm
3, Sales diri Invoice Proforma la seal.
4, macaamiisha lacagta ee deposit ama saamiga lacagta oo noo soo diri rasiidka Bank.
5, Production Bilowga Stage-warran macaamiisha ah in aan ku heshay bixinta, Oo muunad ka dhigi doonaa sida codsigaaga, kuu soo diri sawiro ama shaybaar si aad u hesho ogolaansho. Ka dib markii ansixinta, waxaan wargeliyo in aan kuu diyaarin doonaa wax soo saarka & wargeliyaan markii qiyaasay.
6, wax soo saarka-diri Dhexe photos si ay u muujiyaan line-soo-saarka taas oo aad ka arki kartaa waxyaabaha aad mar kale Xaqiiji waqtiga dhalmada qiyaasay..
7, End Production-Mass waxyaabaha soo saarka photos iyo baarka idiin soo diri doonaa si loo ansixiyo, waxa kale oo aad diyaarin kartaa Inspection xisbiga saddexaad.
8, Macaamiisha u bixiyo dheelitirka iyo alaabta maraakiibta waxaan diyaarin.
9, Order la dhihi karaa "dhameysato" marka aad hesho alaabta iyo ka dhergin iyaga la.
Jawaab-celinta noo saabsan Quality, Service, celinta Market & jeedina. Oo aan samayn karnaa si fiican.
Annagu waxaannu nahay Warshadaha a. Waxaan leenahay caaryada dhamaystiran iyo qalabka wax soo saarka si toos ah, waxaa ay hubisaa in aan awood u leeyihiin inay fuliyaan jadwalka wax soo saarka loo gaarsiiyo wakhti.
waxaan ku leeyahay waayo-aragnimo 10 sano in industry this. Taas macnaheedu waa ku eegaan karaan dhibaatooyin ah ee amarka iyo wax soo saarka. Sidaa darteed, waxaa hubi inaad lean halista ah ee xaaladda xun ku dhici dhigi doonaa.
Tilmaan in Tilmaan Service
Waxaa jira mid ku iibka ka dhigan kii aad u adeegi doonaa baaritaan waxyaabaha geeyey baxay. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, kaliya aad u baahan si ay ugala hadlaan isaga la dhibaatooyinka oo dhan iyo habka waqti badan badbaadiyay.
amar kasta, kormeer adag lagu qaban doonaa waaxda QC ka hor maraakiibta. Tayada xun iyo xaalad laga fogaadaa doonaa albaab.